Allgedo.com » 2013 » February » 22
Home » Archive Daily February 22nd, 2013
Ganacsade Dr. Maxamed Burhaan oo maanta dhaawac loogu geystay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta dhaawac loogu geystay Dr. Maxamed Burhaan Axmed Deeq oo ah aqoon yahan iyo ganacsade kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland. Ganacsadaha oo ku jira goob ganacsi oo uu leeyahay ayaa waxaa si xun ugu dhaawacay shaqsi aan xil kas aheyn oo aanan la garan ujeedada uu ganacsadaha dhaawaca ugu geystay. Inkasta oo aanan wali la hubin, waxaa laga yaabaa sababta...
Tacsi tiiranyo leh oo ku socota qoyska iyo qaraabada uu ka tagay Nabadoon Cumar Cilmi Beyle
Allaha u naxariistee waxaa Magalada Caabudwaaq ku geeriyoodey Nabadoon Cumar Cilmi Beyle Oo ku magac dheeraa Cumar Koodey. Cumar Allaha naxariistii Janno Allaha ka waraabiyee wuxuu ahaa nabadoonka beesha reer Shirwac Diini. Waxaa halkaan taxi uga diraya illahayna naxariis iyo Janno uga baryaya dadka hoos ku qoran oo kala jooga Mareykana, Kadada iyo Yurub: 1). Cambaro Nur Ashkir 2). Abdi Adan Gurey...
Kulamo iyo Wada Xaajoodyo ka soconaya Magaalada Garbahaarey
Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa waxaa ka soconaya Kulamo iyo Wada xaajoodyo ku aadan shir Beri Magaaladaasi uga furmi doono Mas’uuliyiin, Saraakiil iyo Waxgarad ka soo jeeda Gobolka Gedo, iyadoo Ujeedada kulanka Berito ka furmi doonana Garbahaarey uu la xariiro arinka ku Sabsan Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka oo mudooyinkii ugu dambeeyey ay isku khilaafeen Siyaasiyiin...
Mareykanka oo ka Hadley Duqeymaha Droneska ay ka Geystaan Wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay
Iyadoo Mareynkanka duqeymo dad badan oo shacab ah ay ku dhinteen ka geystay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa markii ugu horeysay Senitaro ka tirsan Mareynkanka waxay soo bandhigeen qiyaas ahaan tirada shacabka iyo dagaalyahanada ku dhintay duqeymaha diyaaradaha Droneska ee Mareynkanka sida Sharcidarrada ah ay u geystaan. Sida warbaahinta gudaha Mareynkanka ay baahiyeen iyagoo soo xiganaya xildhibaano...
Ra’isal wasaare ku xigeenka dalka oo Turkiga Bekir Bozdag iyo wasiirka horumarka dalkaasi Cevdet Yilmaz ayaa la qorsheynayaa inay booqasho ku yimaadaan maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Safarka masuuliyiintaan ka tirsan dowlada Turkiga ayaa waxaa uu qeyb ka yahay safar labo maalin ah oo la doonayo inay ku tagaan dalalka Soomaaliya iyo Sudan. Masuuliyiintaan ayaa inta ay ku sugan...
Swedan oo Mar kale Ciidamo u soo Diraysa Xeebaha Soomaaliya
Barlamanka dowladda Sweden ayaa eegaya suurta galnimada in qaar ka mid ah ciidamadooda badda loo soo diro xeebaha Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcad badeeda. Talaabadaani ay Swedenciidamada ugu soo dirayso biyaha Soomaaliya ayaa waxaa ku baxaya lacag dhan 210 milion oo ah lacagta wadankaasi. Barlamanka dalka Sweden waxa uu sheegay in labo todobaad gudahooda uu go’aan kaga gaarayo...
Dowlada Holland ayaa lagu amray inaysan dib Soomaalida dalkaasi ku sugan aysan ugu soo celin meel ka mid ah koofurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya oo Muqdisho ay ku jirto ilaa amaanka magaalooyinka dalka Soomaaliya uu ka wanaagsanaanayo. Hayada qaxootiga qaramada midoobay UNCHR ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dowlada Holland ay qorsheynayso inay dib usoo celiso dad magngalyo ahaan u tagay...